Nhau - Ramangwana Kubudirira Kwema Medical Devices
Ramangwana Kubudirira Kwema Medical Devices
Nemamiriro azvino ekumhanyisa emidziyo yezvokurapa, indasitiri yezvigadzirwa zvekurapa inoda kugadzira kubva pamaonero ehumwe, ungwaru, uye kufamba. Kune rimwe divi, aya maonero anogona kusimudzira zvido zvekusimudzira magariro. Kune rimwe divi, mapoinzi matatu aya achave kiyi yekusimudzira mune ramangwana. Saka nderipi riri ramangwana rekuvandudza kuraira kwechiremba chishandiso dhizaini dhizaini? Mune ramangwana, dhizaini yeanorapa mudziyo indasitiri ichave yakasarudzika uye nhare. Iko kuvandudzwa kwemaindasitiri dhizaini yezvakangwara zvekushandisa zvekurapa kwakasimudzira kumhanya kweruzivo ruzivo. Kuburikidza neInternet, kutaurirana pakati pevarwere, vashandi vekurapa, zvekurapa, masangano ekurapa, uye kuvakwa kwehurwere-centric hutano hwekuchengetedza hunovakwa.
Chinangwa ndechekupa mabasa ekurapa kuburikidza nehungwaru uye nzira dzakabatana dzakakomberedza varwere, kuti vawane budiriro inoenderana muzvinhu zvitatu zvemutengo webasa, mhando yebasa uye simba rebasa.
Semugadziri, iye anofanirwa kuita kwake kufunga uye kupindura kune zvemagariro nyaya uye zvigadzirwa zvigadzirwa. Funga kuti dhizaini yezvakanaka zvekurapa zvigadzirwa zvinofanirwa kuitiswa sei mune zera reruzivo; funga maitiro ekuita kuti varwere vanzwe kuve kwehukama uye kusiyaniswa kwezvigadzirwa zvinounzwa nekusimudzira tekinoroji; bvumira varwere kuti vashandise zvekurapa zvekuzviongorora uye kupora kumba, Nakidzwa nerubatsiro kupfuura chipatara rubatsiro, uye nerubatsiro rwechipatara-kure-kureba kuongorora, unogona kupedzisa pre-kiriniki kuyedzwa, kudzivirira, kuongorora uye post-chirwere mhinduro, kupora , uye matanho ehutano.
Naizvozvo, ivo vakangwara, vakasarudzika, uye akasiyana-siyana masystem system kusangana dhizaini yeindasitiri dhizaini yezvakanaka zvekurapa zvishandiso ichave nyowani yekukumbira yekugutsa ruzhinji rwemhuri. Izvo zvinoreva zvakare kuti hunyanzvi hwekugadzira hwekushandisa kwemaindasitiri dhizaini uye nzira dzekushandisa dzeakachenjera marapirwo ekurapa achakurudzirwa Yakakwirira dhizaini inodikanwa.
Smart yekurapa ndiko kushandisa kweInternet yezvinhu hunyanzvi mune yekurapa, uye kugoverana kwezvekurapa zviwanikwa kunopedzwa nenzira yedhijitari uye kuona. Inotungamirwa nekuvandudzwa kutsva kwekurapa, nyika yangu iri kubhadhara zvakanyanya nekudyara mumunda weveruzhinji kurapwa nekurapa mune yeindasitiri dhizaini yezvakanaka zvekurapa zvigadzirwa uye ruzivo rwekurapa.
Mune ramangwana, iyo indasitiri dhizaini yezvakanaka zvekushandisa zvekurapa icharatidza maitiro akasimba ekushandura uye kufamba.